DHIMMOOTA YAADA FALMII OBBO GIRMAA XUMURAARRATTI YAADA DHIMMAMTOOTAA (Activists) – Beekan Guluma Erena
DHIMMOOTA YAADA FALMII OBBO GIRMAA XUMURAARRATTI YAADA DHIMMAMTOOTAA (Activists)	Beekan Guluma Erena
Jaarmaa Qeerroo Bilisummaa fi “Gorsaa” fi Ololaan Walmakaa Obbo Boruu Barraaqaa
Olola Mootummaa Wayyaaneef Baabsu Eegaluu Gantoota Biyya Alaa Maadhefatan
Beekaa Namoomsaa tiin, Caamsaa 4, 2016
Har’a ganama hirribaa ka’ee hojii koo idilee yammuun jalqabuuf jedhu, akkuman amaleeffadhe “mee har’a maal tu jira laata?” jedhee yammuun facebook kiyya banu, jalqabuma barruu Obbo Boruu Barraaqaa mata-dureen isaa “Qarri Qeerroo Oromoo Akka Hin Doomneef Dafnee Haa dirmannu!” jedhuttan ba’e. Gidduu kana dhimma nama Girmaa Xurunaa jedhamuu fi “Sagalee Qeerroon” wal qabatee waanti tokko-tokko deddeemaa waan tureef, anis fedhiin dubbisuu natti horamee utuman hojiin koo fardiin na muddu jiruun dubbisee keessa fulla’e. Ergan dubbisee fixees, dhimma kana irratti yaada kennachuu akkan qabu natti dhaga’ame.
Hunda dura waan lama ifa gochuun barbaada. 1) Qeeqa ijaaraa ta’e (constructive criticism) nan deggera. 2) Ani dhugaa jiru akka natti ifettii fi hangan irraa quba qabutti ibsuu malee eenyuufuu baabsuuf, ykn yakkis ta’e dogoggorri hojjetame tokko yoo jiraate haguuguuf akkan fedhii hin qabne ibsuun barbaada. Anis akka nama tokkotti hiri’noota jaarmaan Qeerroo kun qabaachuu malu akka sirreeffatan caasaan argadheen gorsa koo itti dhaamaa tureera. Haa ta’u malee, jaarmaan Qeerroo kun akkuma jaarmaalee Oromoo biroo jabinas, laafinas kan qabaatu ta’uu namni hin hubanne yoo jiraate wallaalaa dha. Miseensonni hoggana Qeerroo kan samii irraa gadi bu’an utuu hin taane, kan ummatuma Oromoo dhaloota qubee keessa maddani dha. Sabni tokko beekaa duwwaa hin qabaatu; wallaalaas ni qabaata. Goota duwwaa hin qabaatu; lun’as ni qabaata. Kan kaayyoo isaaf amanamaa fi cichaa ta’e duwwaa hin qabaatu; gantuu fi basaastuus ni qabaata. Hooggana jaarmaa tokkoo yammuu hundeessan, utuu qabsaawaa ogummaa (quality) hunda namaaf guutu qabaatanii akkam bareedaa ture? Dhugaan lafarra jiru garuu kana miti. Hooggana kaayyoo isaaf amanamaa ta’en ijaara yammuu jettu, gantuu fi basaastuun si keessa seenti. Hoogganni saba tokko calaqqee saba sanaa ti. Hamaas, gaariis ni qabaata. Hooggana qabsoo bilisummaa tiif madaalli jalqabaa kaayyoo qabsoon sun akeekkatetti amananii of kennuu dha. Egaa namni hoogganaa jaarmaa bilisummaa ta’e tokko sabicha guutuu keessaa sirna dimookraasiitiin filama utuu hin taane, kanneen qabsichaaf irbuu seenanii itti makaman keessaa filama. Isaan kunis sabichuma keessaa waan ba’aniif, amaloota diigoo ta’an kanneen qaban yoo itti seenanii rakkoo fidan kan nama dinqu miti. Inni guddaan rakkoon sun erga qulqullaa’ee baramee akkamittiin sirreessina isa jedhu dha.
Obbo Boruun yakkoota jaarmaa Qeerroo Bilisummaatiin dalagaman jedhe irratti hundaa’uudhaan akka “Qeerroof dirmannu” gorsa nuuf kenneera. Anis dhimma kana ilaalchisee qabxiilee lama qofa fudhadheen waa jechuu barbaada. Qabxiileen kunniinis: 1) Obbo Boruun namni Girmaa Xurunaa jedhamu “hoogganaa” qeerroo fi basaastuu Wayyaanee (double agent) ta’uu “qorannoodhaan” akka bira ga’e ibsuudhaan qaama dhimmi kun itti gabaafamu biratti “amanamaan namicha kana caalu akka hin jirre” nuuf gabaase. 2) Obbo Boruun radiyoon “Sagalee Qeerroo” jedhamu sobaan kan guutame dha nuun jedha. Itti fufuudhaanis, gabaasa sobaa akkasii “waggaa 7 guutuudhaaf dhaga’aa akka yoona geenye” jedhee yakka irra tuula.
Mee dhimmoota kanneen tokko tokkoon haa xiinxallu.
1) Basaasummaa Girmaa Xurunaa ilaalchisee: Namni Girmaa Xurunaa jedhamu akkuma jedhame basaasa ta’uu mala. Haa ta’u malee, namni akka Obbo Boruu Barraaqaa “xiinxalaa siyaasaa” of moggaasee mediyaarratti dubbatuu fi barreessu tokko hanga danda’ametti waan dubbatuuf ragaa qabatamaa dhiheeffachuu qaba ture. Ykn waan qabatamaa irratti hundaa’uu qaba ture. “Qorannoodhaan bira ga’eera” jechuun qofaatti ga’aa miti. Basaasni nama ifatti dalagu miti. Namni tokko basaasa ta’uu isaa kan beekuu danda’u qaama isa erge sana qofaa dha. Fakkeenyaaf Girmaa Xurunaa basaasa Wayyaanee ta’uu isaa kan qulqulleessee beekuu danda’u nama ofumaafuu basaasa Wayyaanee ta’e qofaa dha. Obbo Boruun akka jedhu kanatti dhuguma qulqulleessee beekeera yoo ta’e, ofiifuu basaasa Wayyaanee ti isa jedhutti nu geessa. Ta’uu baannaan jette-jettee irratti hundaa’ee dubbata jechuu dha. Jette-jetteen ammoo raga hin ta’u. Waan namni fedhe facebook irratti maqaa fedhe moggaafatee “ebelu basaasa” jedhee barreessu irraa ka’amee xiinxalli godhamu ragaa irratti kan hundaa’e miti. Ololaa fi maqa xureessii ta’uu mala. Dhugaa dha, basasummaa Girmaa Xurunaa kan shakkisiisu gabaasni hanga tokko qabatamaa ta’e gaaffii fi deebii hundi keenya VOA Afaan Oromoo irraa dhageenye jiraachuun ifaa dha. Gabaasni kunis hoogganni dhimmi kun ilaalu gaaga’ama hidhaa ilmaan Oromoo irratti raawwateef ittiin ka’umsa qorannoo fi of-qulqulleessuu akka ta’uu fi akka gargaaru ni abdatama. Egaa namni akka Obbo Boruu qaama hoogganaa ture tokko “xiinxalli” fi “gorsi” inni facebook kan firris, diinnis dubbisu irratti facaasu gaaga’ama inni fiduu tilmaamuu hanqachuun bilchina inni qaba jedhee xiinxalaa itti of moggaase gaaffii jala galcha.
2) Girmaa Xurunaa Hoogganaa Qeerroo Ta’uu ilaalchisee: Obbo Boruun akka Girmaa Xurunaa “hoogganaa” jaarmaa Qeerroo ta’e nutti himeera. Asirratti hoogganaa ol-aanaa moo qaama hoogganaa ti gaaffi jedhu adda hin baafne. Akka barruu isaarraa dubbifnutti garuu dhimma Qeerroo kan baqaqsee hodhaa ooluu fi kan shufeera ta’ee geggeessuu Girmaa Xurunaa akka ta’etti dhiheessa Obbo Boruun. Maallaqni ergamus akka isatti ergamu jette-jettee funaanee facebook irratti maxxansa. Hoogganni Qeerroo biyya keessaa, maallaqnii fi dhiheessiin adda-addaa karaa eenyuu akka dhihaatu silaa kan iccitiin qabamu (underground) ture. Namoonni maqaa masoo moggaafatanii dhimma iccitii ciccimaa akkasii akka waan qabatamaa tokkootti yoo facaasan nama hin ajaayibu. Gariin namoota akkanaa jaarmaa Qeerroo akka masaanuutti ilaalu waan ta’eef ololaaf itti gargaaramu. Namni akka Obbo Boruu maqaa isaatiin barreessu, itti gaafatamummaa haala hin qabneen (irresponsible), sanuu utuu dhugaaf soballee addaan hin baasiin keessa jaarmaa tokko dirreerratti fuudhee facaasuun nama dhiba. Akka natti mul’atutti Obbo Boruun erga itti gaafatama ol-aanaa itti kennamee ture (dubbataa dhaabaa), fedha isaatiin gadi-lakkisee deemee booda waan anaannate (became bitter) fakkaata. Kunis kan nama dinqu miti; isaan hin jalqabamne waan ta’eef.
3) “Gabaasa Sobaa Sagalee Qeerroo Waggaa 7” Ilaalchisee: Obbo Boruun waan “gabaasa sobaa Sagalee Qeerroo” jedhu akkasittiin ibsa.
“Gaafa fedhanis qonnaa investera Tigree hiktaara kuma hangas guutummaatti barbadeessine jedhu. Kanaafis ragaa yoo dhiheessan takkaa hin agarre. Magaalaan Jimmaa fincilaan raafamaa oolte, magaalaa Naqamtee keessatti Qeerroon FDGdhaan dachii garagaleche, Qeerroon Lixa Shaggar diinota meeqatama irratti tarkaanfii laalessaa fudhate, qondaalota tikaa abaluu faa jedhaman Qeerroon magaalaa Finfinnee keessatti du’aan adabe fi kkf jedhanii gabaasu. Lakkii raga fidaa yoo jedhaman waraqaa muka silkii irratti maxxanfamte tokko lama wayii suuraa kaasanii agarsiisu. Akka gabaasaa isaaniitti Oromiyaan guutuun eega gaafa ‘Qeerroo Bilisummaa’ jaaramee qabee fincila Toophiyaa keessatti mul’atee hin beeyneen dachii raasaa ooltee bulti. Akka itti gabaafamutti waan diinni guyyaa lama keessatti darsa isaa xaxatee Oromiyaa gadhiisee bahaa jiru fakkaata. Akka bulluqa gabaasa jara kanaatti Oromiyaan bilisoomuuf torbaan tokko caalaa isiitti hin fudhatu ture. Garuu gabaasaa sobaa akkasii kana waggaa 7 caalaaf guyyaa guyyaatti odoo wal irraa hin cinne dhagahaa yoona geenye.”
Qabxiin ijoon asi irratti Obbo Boruun jala sararee himuu barbaade, gabaasni gabaafamu kan dhugaa irratti hundaa’ee fi qulqullaa’e (objective and concrete) ta’uu qaba kan jedhu dha. Kana irraa ani rakkina hin qabu. Kun dhuguma qabxii barbaachisaa dha. Anillee jaarmaa Qeerroo kana kanuman gorsa. Haa ta’u malee, utuu isaaniin jedhuu ofiifuu waan qabatamaa hin taane irratti hundaa’e isaan yakka Obbo Boruun. Yammuu nama ykn qaama tokko qeequu ykn yakkuu jalqabdu, ofiif yakka jedhame sanarraa qulqulluu ta’uu mirkaneeffachuu feesisa. Ykn, akkuma doktorri offif sujaaraa afuufaa, sujaaraa hin xuuxiin jedhee nama gorsuu ta’a. Fakkeenyaaf “qonnaa hektaara kuma hangas”, “qondaala tikaa abalu jedhamu adabe”, kkf jedhanii gabaasan jedhee isaan yakka. Erga isaaniin waan qabatamaa malee hin gabaasiinaa jedhee yakke, ofiifis waan qabatamaa fi qulqullaa’aa, yoo xiqqaate tokko lama dhiheessuu tu irraa eegama ture. Qeerroon gabaasa kana fakkaatan guyyaa uumame irraa qabee gabaasaa ture. Gabaasni inni amma “soba” jedhu kun kan gaafa kami ti laata? “Abalu” kunimmoo eenyu dha? Akkamitti soba ta’uu mirkaneeffate? Kaayiroo, Kaartum moo Asmara yammuu ture qoratee bira ga’e? Yoo hin qulqullaa’iin olola dha. Ololli kunis social mediyaa irratti hanga faca’etti Wayyaaneef kan hojjetu ta’uu Obbo Boruun hin beeku jedhanii yaaduun nama dhiba.
Karaa biraatiin Obbo Boruun “gabaasaa sobaa akkasii kana waggaa 7 caalaaf guyyaa guyyaatti odoo wal irraa hin cinne dhagahaa yoona geenye” jedhee nutti hima. Hubadhaa, waggaan turban Obbo Boruun baanu kun yammuu inni qaama hooggana olaanaa ture dabalata. Yoon dogoggoruu baadhe hanga 2014-tti Obbo Boruun dubbataa dhaabaa ture. Hanga waggaa lamaan kana duraatti ta’uu isaa ti. Kanaafuu, “gabaasa sobaa darbaa ture” jedhee inni baanu yoo dhugaa ta’eef kan itti gaafatamu tokko Obbo Boruu dha. Utuu hoogana ol’aanaa hin muudamiinis qopheessa SBO akkasumas TV Gaaddisa dhugaa ture. Egaa gabaasni sobaa kun har’uma itti mul’atee ree? Kan hubatamuu qabu waggaa 7 inni baanu kun utuu Qeerroon hin ijaaramiin waggaa lama dura ta’uu isaa ti. Kanaafuu, kan Obbo Boruun asirratti yakkaa jiru Qeerroo qofaa utuu hin ta’iin qaamuma itti miseensomee hoogganaa ture dha.
4) Waraqaa Muka silkii irratti Maxxane: Dalagaa gootummaa ijoolleen qeerroo erga uumama Qeerroo Bilisumaa irraa qabee dalagaa turan keessaa tokko, waraqaalee, dhaadannoolee, alaabaa Oromootiin faayaman bakka hundatti maxxansuu fi iddoo namni arguu danda’u hundatti facaasuudhaan saba Oromoo dammaqsuu fi kakaasuu dha. Bakka hedduutti alaabaan mataan isaa maxxanee mul’ataa yoona ga’e. Iddoon waraqaalee fi alaabaaleen kun itti maxxanan kunneen kan amanuufillee nama dhibu dha. Manneen barnootaa, Yuunivasiitiilee adda addaa, Balbala waajjiraalee mootummaa, fuuldura (gate) yuunivarsiitiilee fii koolejoota adda-addaa irratti sodaa tokko malee maxxansanii suraa fi vidiyoo kaasanii website Qeerroo irratti maxxansaa yoona ga’an. Egaa hojii gootummaa gaafatu akkasii ti kan Obbo Boruun “waraqaa muka silkii irratti maxxanfamte tokko lama wayii suuraa kaasanii agarsiisu” jedhee qoosu. Dalagaan gootummaan akkasii kan dinqisiifamuu fi jajjabeeffamu malee kan itti qoosamu hin turre. “Isa taa’ee ilaaluuf, daakuun atarii dimbilaala” akkuma jedhamu, Obbo Boruun dalagaa gootummaa ijoolleen kun lubbuu isaanii balaa hamaaf saaxilanii dalagan akka waan laayyootti gadi caccabsee yammuu itti qoosu arguun dugumatti nama madeessa.
Xumura irratti, Obbo Boruun ololaa fi gorsa ykn qeeqa (constructive criticism) adda baafatee beekuu tu irra jira ture. Xurumbaan ololaa inni akkuma tasaa balaqqame kunniin oole utuu hin buliin isuma madeessuu fi barcuma kabajaa inni dhaloota qubee biratti qabaachaa ture akka jalaa fudhu hin shakkisiisu. Qeerroon inni gorses, gorsuu baates, rakkoo dhalate kamuu irra aanee qabsoo isaa hanga bilisummaatti itti fufa.
Maddi: bookaa76@gmail.com, fi
Yaada Dabalataaf Sagalee (Audio) kana tuqaa
← ROOBAAFI ROOBEE-Baacoo Bifa waliin dubbiin qindaa’e-Feeyyiftuu Tolasaa’tiin
WALIIGALTEEN NAMA GAMMACHIISA, GAMMACHUUN KAN DHUGOOMU GARUU YOO HOJIIN MIRKANAA’E QOFA-Saphaloo Kadiir irraa!!) →